Precambrian Eon: ihe niile ị chọrọ ịma | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-agagharị na mbido akara ahụ geological oge. Oge mbu nke gosiputara akuko banyere uwa. Ọ bụ banyere Precambrian. Nke a bụ okwu ochie ochie, mana ejiri ya gosipụta oge ụwa tupu e wuwe nkume. Anyị ga-agagharị na mmalite nke ụwa, na-abịaru nso oge ịkpụ ya. Achọpụtala ọkpụkpụ ndị a na-amata ụfọdụ nkume Precambrian. A makwaara ya dị ka "ndụ gbara ọchịchịrị."
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe niile metụtara oge a nke ụwa anyị, na post a anyị ga-agwa gị ihe niile. Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Mmalite nke ụwa
3 Mgbe ochie
Mmalite nke ụwa
Nhazi nke usoro mbara igwe
Precambrian kpuchitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke akụkọ ntolite ụwa dum. Iji ka mma ịmụ ya, e kewara ya n'ime oge atọ: Azoic, Archaic na Proterozoic. Preonambrian eon bụ nke gụnyere oge niile gbasara ala tupu 600 nde afọ. Akọwawo eon a dị ka nke dị na oge Cambrian. Otú ọ dị, taa, a maara na ndụ n'ụwa bidoro n'oge Archaic oge ochie na ihe ndị dị ndụ mejupụtara buru ibu.
Mpaghara abụọ nke Precambrian nwere bụ Archaean na Proterozoic. Nke a bụ nke mbụ. Nkume ndị na-erughị narị afọ isii ka a na-ewere dị ka Phanerozoic.
Oge nke eon a bidoro site na nguzobe nke ụwa anyị ihe dịka ijeri afọ 4.600 gara aga ruo mgbe mgbanwe gbasara ọdịdị ala. Ọ bụ mgbe mbụ multicellular ndụ a maara dị ka Cambrian Explosion pụtara na Cambrian na-amalite. Emere nke a n’ihe dị ka nde 542 afọ gara aga.
E nwere ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-atụle ịdị adị nke oge nke anọ n'ime Precambrian a na-akpọ Chaotian nakwa na ọ dị tupu ndị ọzọ niile. O kwekọrọ na oge mbụ e guzobere usoro mbara igwe anyị.
Oge mbu a mere n’etiti afọ ijeri 4.600 nke mbụ na ijeri afọ 4.000 mgbe e guzobere ụwa anyị. Usoro mbara igwe n’oge ahụ na-akpụ n’igwe ojii na ikuku nke a maara dịka nebula nke igwe. Nebula a bụ nke asteroids, comets, ọnwa, na mbara ala.
Ọ bụ echiche siri ike na ọ bụrụ na ụwa kụkọtara na mbara igwe buru ibu ana - akpọ Theia. O kwere omume na nkukota a ga - agbakwunye 10% nke elu ụwa. Iberibe ihe ndị si ná nkwekọrịta ahụ gbakọtara ọnụ wee ghọọ ọnwa.
Enwere nkume dị ole na ole site n'oge Azoic. Ọ bụ naanị iberibe iberibe mineral ka a chọtara na ájá dị na Australia. Agbanyeghị, emeela ọtụtụ nyocha na etu ọnwa dị. Ha niile kwubiri na nsogbu nke kpakpando asteroid na-adakarị na ụwa n'oge oge Azoic.
N'oge a, elu ụwa dum bibiri. Oké osimiri bụ nke mmiri mmiri, sọlfọ na-ekpo ọkụ na ebe mgbochi dị ebe niile. A na-agbọpụta ọkụ ọkụ n'akụkụ niile nke ụwa. E nwekwara mmiri nke nkume na asteroid na-adịghị agwụ agwụ. Ikuku ahụ dị ọkụ, sie ike, jupụta na uzuzu na unyi. Laa azụ n'oge ahụ enweghị ike ịdị ndụ dị ka anyị si mara ya taa, ebe ọ bụ ikuku bụ carbon dioxide na alụlụ mmiri. O nwere ụfọdụ ihe ndị nwere nitrogen na sọlfọ.
Aha ahụ pụtara oge ochie ma ọ bụ nke oge ochie. Ọ bụ oge ga-amalite n’ihe dịka ijeri afọ anọ gara aga. Ihe agbanweela site n’oge gara aga ha. Imirikiti alụlụ mmiri nke dị na mbara igwe jụrụ oyi ma mee ka oke osimiri zuru ụwa ọnụ. Ihe ka ọtụtụ n’ime carbon dioxide ghọọkwa limestone ma debe ya n’elu ala nke oké osimiri.
N’oge a, ikuku mejupụtara nitrogen na ihu igwe juputara n’igwe ojii na mmiri ozuzo. Lava malitere ịjụ oyi iji ghọọ ala oke osimiri. Ọtụtụ ugwu mgbawa na-arụ ọrụ ka na-egosi na isi ụwa ka na-ekpo ọkụ. Ugwu nke ọkụ ahụ nọ na-akpụ obere agwaetiti ndị, n'oge ahụ, bụ nanị ebe ala dị n'ebe ahụ.
Obere agwaetiti jikọtara onwe ha iji mepụta ndị buru ibu ma, n'aka nke ha, ha abụọ kụrụ ụwa.
Banyere ndụ, naanị otu algae nwere mkpụrụ ndụ dị n’otu n’okpuru oke osimiri. Udo nke uwa zuru iji kwado ikuku na-ebelata nke methane, amonia na gas ndị ọzọ. Ọ bụ mgbe ahụ ka ihe dị ndụ na-adị adị. Mmiri si na kọmpụta na hydrated mineral jikọtara na ikuku. Enwere mmiri ozuzo dị iche iche na ọkwa apocalyptic nke guzobere osimiri mbụ nke mmiri mmiri.
Akụkụ mbụ nke Precambrian dị iche na ihe anyị maara taa: ha pere mpe ma nwee akụkụ nke okwute dị egwu. Ọ dịghị ndụ bi na ha. N'ihi ike ala nke ụwa na-agbadata ma na-ajụkwa oyi, ikike ndị a gbakọtara n'okpuru wee mee ka ndị ala ahụ gbagoro. Nke a mere ka e nwee ugwu na ugwu ndị dị larịị ndị e wuru n’elu oké osimiri.
Anyị banyere oge Precambrian ikpeazụ. A na-akpọkwa ya Cryptozoic, nke pụtara ndụ zoro ezo. Ọ malitere ihe dịka ijeri afọ 2.500 gara aga. Nkume zuru oke guzobere na ọta iji malite usoro usoro ihe omimi. Nke a malitere tectonics efere ugbu a.
N'oge a, e nwere ihe ndị dị ndụ na mmekọrịta mmekọrịta n'etiti ihe dị ndụ. Ka oge na-aga, mmekọrịta mmekọrịta ahụ na-adịgide adịgide na ntụgharị ntụgharị nke ike gara n'ihu wee wuo chloroplasts na mitochondria. Ha bụ mkpụrụ ndụ eukaryotic mbụ.
N'ihe dị ka ijeri afọ 1.200 gara aga, tectonics efere mere ka ọta daa ihu, akpụ Rodinia (okwu Russian pụtara "nne ala"), mpaghara mbu nke uwa. Osimiri algae na-ese foto gbara mmiri n'akụkụ oke osimiri a. Usoro nke photosynthesis na-agbakwunye ikuku ikuku na mbara igwe. Nke a mere ka ụmụ irighiri ihe ndị dị n’anụ ahụ na-apụ n’anya.
Mgbe obere oge ice gachara, ihe ndị dị ndụ na-enwe ọdịiche dị ngwa. Ọtụtụ ntule bụ cnidarian yiri jelii. Ozugbo irighiri ihe ndị dị nro mere ka ihe ndị ọzọ dị omimi pụta, Precambrian eon bịara na njedebe ịmalite eon dị ugbu a nke a na-akpọ Phanerozoic.
Site na ozi a ị ga-enwe ike ịmụtakwu ihe gbasara akụkọ ntolite ụwa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Precambrian Eon: ihe niile ị chọrọ ịma
Kedu ihe bụ ihu igwe ihu igwe na olee otu esi atụgharị ya?